Ifulethi le-Studio e-Chalet Allmenglühn
Lauterbrunnen, Canton of Bern, i-Switzerland
Siyakwamukela e-Chalet Allmenglühn, esendaweni ephakeme kancane endaweni ebizwa ngokuthi i-Wytimatte edolobhaneni elithandekayo laseLauterbrunnen. Indawo yokuhlala ihlinzeka ngazo zonke izinsiza njengekhishi elihlome ngokuphelele, i-WIFI, indawo yokupaka yamahhala kanye negumbi lokushushuluza, ukwenza amaholide akho akhululeke ekunakekelweni. Jabulela ukubuka okumangalisayo kwentaba edumile yaseBreithorn ukusuka efulethini lethu ngazo zonke izikhathi zonyaka. Sibheke ngabomvu ukuhlangana nawe!
I-Chalet Allmenglühn yethu isendaweni ephakeme kancane e-Wytimatte futhi inikeza umbono oyingqayizivele wedolobhana i-Lauterbrunnen eline-Staubbachfall edumile kanye nentaba iBreithorn eningizimu. Ifulethi le-studio linokufinyelela okuyimfihlo kanye ne-patio yangasese enendawo yokuhlala nokubukwa eningizimu. Uzothola ikhishi elihlome ngokuphelele, i-WIFi, i-en-suite yokugezela kanye negumbi lokugqoka elihlukile. Sinikeza amathawula, ilineni lokulala kanye nezitsha zasekhishini. I-skis, izicathulo ze-ski, izicathulo zokuhamba ngezinyawo noma izikhwama zingagcinwa ekamelweni lethu elihlukile lokushushuluza.
I-chalet ingafinyelelwa ngemoto futhi inikeza indawo yokupaka mahhala. Isikhungo sedolobhana kanye nesiteshi sikaloliwe singafinyelelwa ngezinyawo ngemizuzu eyi-10-15. Isiteshi sebhasi esiseduze singama-300m nje ukusuka e-chalet.
I-Lauterbrunnen iyindawo ekahle yokuqala yemisebenzi eminingi. Ebusika, imimango yezifunda ze-ski i-Mürren-Schilthorn kanye ne-Kleine Scheidegg/Männlichen ithembisa izinsuku zokushushuluza ezingenakulibaleka. Ithrekhi ye-ski enqamula izwe ingafinyelelwa ngezinyawo ukusuka ku-chalet yethu futhi imigijimo eminingi ye-sledge ijabulisa umndeni wonke. Ehlobo, kunemizila eminingi yezintaba ukuze uhlole isigodi saseLauterbrunnen nezintaba ezizungezile ngombono oyingqayizivele.
I-Lauterbrunnen, isigodi sezimpophoma ezingu-72, inikeza okuhlangenwe nakho kwamaholide okuyingqayizivele phakathi kwezinhlangothi zezintaba eziphakeme. Indawo i-Wytimatte iphakeme kancane ngaphezu komgwaqo omkhulu futhi inikeza umbono ongenakulibaleka wentaba iBreithorn eningizimu kanye ne-Staubachfall edumile. I-Lauterbrunnen iyindawo ekahle yokubuka yemisebenzi eminingi ethokozisayo kanye namaholide aphumule. Ebusika, ithrekhi yokushushuluza enqamula izwe ingafinyelelwa ngezinyawo ukusuka e-chalet kanye ne-gondola ukuya endaweni yokushushuluza i-Mürren-Schilthorn kanye nesitimela esiya ezindaweni zokushushuluza e-Kleine Scheidegg kanye ne-Männlichen kungafinyelelwa ngezinyawo noma ngebhasi. Ukugijima kwe-sledge okuningi kunikeza ubumnandi kubo bonke abalandeli basebusika. Ehlobo, izindlela eziningi zokuhamba izintaba esigodini esiyingqayizivele saseLauterbrunnen kanye nezifunda ezizungezile zilinde ukubhekwa. Thatha uhambo oluya eJungfraujoch edumile enombono omangalisayo phezu kwe-Aletsch Glacier. Ukuhamba ngezinyawo eduze komfula i-Lütschine kuqinisekisa amahora okuphumula kuzo zonke izinkathi zonyaka.
Ababungazi bakho bahlala esakhiweni esifanayo futhi bayatholakala nganoma imiphi imibuzo ngaso sonke isikhathi. Ukuzihlola kuqinisekisa isikhathi sakho esiguquguqukayo sokufika.
Hlola ezinye izinketho ezise- Lauterbrunnen namaphethelo